Fitia hafakely - MAHAFALY Barson Lahivelo - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Fitia hafakely - MAHAFALY Barson Lahivelo
Ilay foko tene tia,
tena tia anao Maria,
tsy mba azoko hazonina,
tsy mba haiko kobonina.
Tena tiako ny hilaza,
eny na tsy mendrika aza,
ka azafady mba zakao.
Tena tiako re ianao.
Tena tiako amin'ny foko.
Fantatro fa fantatrao,
Raha izany soradoko.
E ry foko diso lalana
satria fitia tsy sahaza,
olona efa misy manana
no isisihanao ka aza...
valinteny hoe: "eny"
fa valinteny hoe :"lo"
MAHAFALY Barson Lahivelo
osrabn (07/05/2005 13:16:00)
Ity tononkalo ity dia nosoratana teo am-pitiavana zazavavy iray antsoina hoe Maria izay efa manana fofombady. Adaladala manko ny fitiavana!
nikopol (12/05/2005 12:23:27)
osrabn, sao dia mba mitovy ilay maria resahantsika fa io maria io koa efa nahatara ahy !
osrabn (12/05/2005 18:25:48)
Izy aloha i Maria tena maha-tara. Tsara tarehy be zay manko izy. Fa ny tsy fantatro dia ny hoe asa na mitovy ny Maria resahintsika na ny anarana ihany no mitovy. Izay aloha fa misaotra anao nametraka hevitra ry nikopol. osrabn
proost (18/05/2005 09:22:57)
tsara ny tononkalonao fa tiako
osrabn (19/05/2005 20:29:03)
Misaotra betsaka proost!
andriary (25/05/2005 15:54:38)
nisy olona tiako sy tia ahy efa ela!rava noho ny antony maro ny fiarahana saingy ny fitiavana mbola nisy tany anatiko tany sy tany aminy koa angamba!efa nanana fofombady , nanambady izy mbola tiako foana, ...eny efa nindaosin'ny fahafatesana izy taty aoriana mbola tiako foana satria fitiavana hafakely toy ity vetsoinao ity no nitiavako azy!
tiavo maria fa fitiavana mafonja izany...
andriary (25/05/2005 15:54:44)
Mpanoratra : MAHAFALY Barson Lahivelo
Nampiditra : osrabn
Daty : 07/05/2005
Mpamangy : 1492
EZAKA VE SA….?
Tsy sasatra aho...
Gasy aho hatrany hatrany
Tsy noho ianao...
Raha mba azoko natao...